“Pogba waa inuu sii joogaa Man United, isla markaana uu iska ilaabaa dalabka Real Madrid” – halyeey kooxda Arsenal Ah – Gool FM
“Pogba waa inuu sii joogaa Man United, isla markaana uu iska ilaabaa dalabka Real Madrid” – halyeey kooxda Arsenal Ah
Dajiye June 16, 2019
(England) 16 Juunyo 2019. Halyeeyga xulka qaranka France iyo kooxda Arsenal ee Robert Pires ayaa kula taliyay xiddiga ay isku wadanka kasoo wada jeedaan ee Paul Pogba inuu sii joogo Manchester United, islamarkaana uu iska ilaawo xiisaha Real Madrid.
Magaca Paul Pogba ayaa si weyn lala xiriirinayaa kooxda Real Madrid inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xagaaga, iyadoo ay wargeysyada “Madrid” ay xaqiijiyeen in maamulka Los Blancos ay baahi balaaran u qabaan inay helaan adeega laacibka reer France kahor inta uusan bilaaban xili ciyaareedka cusub.
Inkastoo uu 26 jirka reer France muujiyay xiisaha uu u qabo inuu ku biiro kooxda Real Madrid, hadana halyeeyga Arsenal ee Robert Pires ayaa kula taliyay inuu sii joogo kooxdiisa Manchester United.
“Aragtida aan ka qabo Paul Pogba, waa inuu yahay ciyaaryahan weyn ee cajiib ah, laakiin waan ogahay in xili ciyaareedkii lasoo dhafay uu u ahaa mid aad u adag”.
“Dad badan ayaa ka hadlaya kaliya imaatinka Pogba ee United-ka, sababtoo ah Manchester United waxay lacago badan ku qarashgareysay Pogba si ay ugu guuleysato”.
“Sidaas darteed waxaa suuragal ah in Pogba ay ku adag tahay inuu la dhaqmo cadaadiskan jirka, laakiin aniga ahaan waxa ugu muhimsan ayaa ah inuu la sii joogaa Manchester United, waa mid ka mid ah kooxaha ugu fiican uguna weyn adduunka”.
“Sababta keentay in United-ka ay heshiiskiisa ku qarashgareeyaan lacago badan, waa kalsoonida ay maamulka kooxda ku qabaan awoodiisa ciyaareed, waan ogahay in Pogba uu yahay mid caqli badan, isla markaana uu qaadan doono go’aanka saxda ee ah inuu sii wato Manchester United”.
“Waan ogahay in Real Madrid iyo Zidane ay doonayaan inay qandaraas la galaan Pogba, taasina waxay ku adkeyneysaa inuu ciyaaryahanka sii joogo kooxda Manchester United, laakiin Premier League waa tartan xoogan, waxaana uu heystaa waxyaabo badan oo uu ku heli karo”.
Muxuu ka yiri Lionel Messi kaddib guuldaradii Argantina kasoo gaartay xulka qaranka Colombia??
“Inaanan ku guuleysanin abaal marinta Ballon d'Or waa gardaradii ugu weyneyd xirfadeyda” - Franck Ribéry